आजकाे राशिफल:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
आजकाे सुनचाँदी दर लाखाै लगानीमा असंख्य पटक ब्रुमर गुडे, सहरको धुलो ज्युँका त्युँ १५ वर्षीया छोरी द्वारा प्रेमीसँग मिलेर घाँटी रेटी बुवाकाे हत्या, शव लुकाउन बाथरुमै पेट्रोल हालेर जलाइन अहिलेसम्मकैठूलो भ्रष्टाचारी सार्वजनिक हुने अख्तियारकाे भनाइ, १४० जना अनुसन्धानमा नेप्सेले रोक्यो ब्रोकर लाइसेन्स
🕑 मङ्ल, असार ३१, २०७६ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७६ असार ३१, मंगलबार। इ.स. २०१९ जुलाई १६। ने.सं. ११३९ दिल्लाथ्व। आषाढ शुक्लपक्ष। पूर्णिमा, २६:०८ उप्रान्त प्रतिपदा।
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)- श्रम परे पनि लगनशीलताले विशेष उपलब्धि दिलाउनेछ। भविष्यका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। शुभचिन्तकहरूलाई साथमा लिएर काममा जुट्नुहोला, महत्त्वाकांक्षी योजना थालनी हुनेछ। आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम, दाम र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला।
बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus)- तत्काल लाभ नभए पनि पछिका लागि काम गर्ने समय छ। उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। कामको चाप बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। स्वास्थ्य र अर्थका हिसाबले पनि दिन कमजोर रहनेछ। परिस्थितिले अप्ठ्यारा चुनौतीहरूसँग सम्झौता गराउन सक्छ। अवसरका लागि दौडधुप गर्नुपर्ला। विवादास्पद जिम्मेवारी आइलाग्न सक्छ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini)- कामको अवसर प्राप्त भए पनि भेटघाट र शिष्टाचारले अलमल्याउन सक्छ। लोकाचारका लागि अनावश्यक वस्तुका पछि दौडनुपर्ला। आजको यात्रा र आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। वचन पूरा गर्न नसक्दा आलोचित भइनेछ। परिस्थिति र सम्बन्ध अनुकूल बनाइराख्न व्यवहारमा सजग रहनुपर्ला। हडबडीले समस्या निम्त्याउनेछ। तापनि, प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने समय छ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer)- अवसरका लागि केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। समयमा लगनशील बन्न नसक्ता प्रतिस्पर्धीहरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। कामको चाप बढ्नेछ भने वादविवादले मन खिन्न तुल्याउनेछ। प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि बुद्धिको उपयोगले प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। हिम्मत गर्दा अप्ठ्यारो स्थितिमा केही काम सम्पादन हुनेछ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo)- परिस्थिति सोचेजस्तो नहुनाले लक्ष्य प्राप्तिमा विलम्ब हुनेछ। अवसर प्राप्त भए पनि मेसो नमिल्नाले पनि काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। पढाइलेखाइमा सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसकिए पनि गुरुजनको सुझाव र सहयोग लाभदायी बन्नेछ। व्यापारमा फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने मिहिनेतले कार्य सम्पादन हुनेछ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo)- निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुने समय रहेकाले हतारमा निर्णय नलिनुहोला। काममा धेरै लाभ उठाउन नसकिए पनि समस्या सुल्झनेछन्। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ। तत्कालको फाइदा हेर्दा परिस्थिति बिग्रन सक्छ। शुभचिन्तकहरूलाई साथमा लिएर काममा जुट्नुहोला, महत्त्वाकांक्षी योजना थालनी हुनेछ।
बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio)- अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको सहयोग जुट्नेछ भने मौका पर्खंदा अप्ठ्यारो स्थितिमा सुधार आउनेछ। मिहिनेतले आँटेको काम बन्नेछ। अर्थ उपार्जनका विभिन्न स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। समाजमा आफ्नो प्रभाव बढ्न सक्छ। धेरै बोल्दा समस्या आउन सक्छ। आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius)- सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। परिस्थितिवश कुनै काममा बढी अलमल हुनेछ। आफ्ना कमजोरी बाहिरिने समय भएकाले गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। व्यापारमा राम्रो फाइदा हुनेछ।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn)- समयमा होस नपुग्नाले आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्ला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। आकस्मिक खर्च बढे पनि यात्राको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। फाइदा नगण्य उठे पनि स्वाभिमानको रक्षा गर्न सफल भइनेछ। दिगो आम्दानी हुने काम फेला पार्न सकिनेछ। आस मारेको कामले उत्साह जगाउनेछ।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius)- प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे लाभ हुनेछ। व्यापार–व्यवसायमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका प्राप्त हुनेछ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces)- आँटेको काम रोकिनेछ भने नयाँ काम गर्न केही बेर प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउनेछन् भने पहिलेका सहयोगीहरू पछि हट्न सक्छन्। परिस्थिति संघर्षपूर्ण देखिए पनि मिहिनेत गर्दा जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ। प्रतीक्षित नतिजा उत्साहजनक नहुन सक्छ। जीवनशैली अलि व्यस्त रहनेछ तर गरी आएको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ।
प्रकाशित मिती- मङ्ल, असार ३१, २०७६
लाखाै लगानीमा असंख्य पटक ब्रुमर गुडे, सहरको धुलो ज्युँका त्युँ
१५ वर्षीया छोरी द्वारा प्रेमीसँग मिलेर घाँटी रेटी बुवाकाे हत्या, शव लुकाउन बाथरुमै पेट्रोल हालेर जलाइन
अहिलेसम्मकैठूलो भ्रष्टाचारी सार्वजनिक हुने अख्तियारकाे भनाइ, १४० जना अनुसन्धानमा
नेप्सेले रोक्यो ब्रोकर लाइसेन्स
सरकारी कर्मचारीकाे सुसाइड नाेट ‘पत्रकारले अर्को अर्थ नलगाउन्’
राजनीतिक दललाई राज्यले अनुदान दिनुपर्ने काुनन निर्माण हुदै
मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आए पछी पुनः सिंगापुर जाँदै प्रधानमन्त्री
रवि लामिछानेसहित तीनै जनालाई मध्य रातमा पुर्याइयाे चितवन
आठ दिन सम्म मनाइने सांस्कृतिक उत्सव ‘गाईजात्रा’ आज देखी आरम्भ
विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी, तिन नेताका तिन सुत्र परिचालन
वैदेशिक रोजगारीमा जान सीपमूलक तालिम अनिवार्य
सुदुरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका नेकपा विप्लवकाे तालाबन्दी, कतै बम कतै पर्चा
राेजगारीका लागी भारत गएका युवकलाई देह व्यापारमा लगाउन जवरजस्ती बनाईयाे युवती
संखुवासभामा नेपाल प्रहरी र विप्लव समूहबीच दाेहाेराे गाेली चल्याे
लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग तत्काल बन्द गर्न सर्वाेच्चकाे आदेश